Telozoro fanaovana bilaogy: singa 3 fahombiazana | Martech Zone
Telozoro fanaovana bilaogy: singa 3 fahombiazana
Alakamisy 8 martsa 2007 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Efa niasa aho ny famelabelarako momba ny Blogging Corporate ity herinandro ity. The fifanakalozan-kevitra momba ny boky anio momba ny Digital Aboriginal tena niteraka ny hafanam-poko sy ny eritreritro momba ny tokony ho lohahevitro. Na dia hiresaka ny tombony sy ny fatiantoka amin'ny fitorahana bilaogy ataon'ny orinasa aza aho, ny antenaiko dia ny ankamaroan'ny olona any no maniry hanao bilaogy. Tsy te hiresaka an'izany amin'izy ireo amin'ny fomba rehetra aho, ka tiako hipoitra ny hafanam-pon'izy ireo. Torohevitra telozoro momba ny famahanam-bolongana no resahiko: singa 3 amin'ny fanaovana bilaogy mahomby.
Na dia ny haitao aza no mpanelanelana amin'izany, rehefa mandeha ny fotoana ny sehatra fitorahana bilaogy dia lasa manara-penitra amin'ny teknolojia fototra. Heveriko fa ny singa ao amin'ny bilaogy mahomby dia ireto manaraka ireto:
Content - ity no fototra iorenan'ny bilaoginao. Resadresaka tsy miova, mangarahara, misokatra ary misy eritreritra momba ny lohahevitra tianao horesahina.
Passion - Mino aho fa mifindra ny filan'ny nofo. Raha tsy liana amin'ny bilaoginao ianao, na amin'ny fanoratana ny fitaovanao, dia hahita anao ny mpamakinao ary hiala… haingana.
vahana - ny bilaogy dia tsy mitombo miaraka amina fidirana iray. Mila vanim-potoana hihaonana sy hihoarana ny vinan'ny mpamaky anao sy hisarihana mpamaky vaovao.
Ny mariky ny lelafo dia solontenan'ny lelafo izay hateraky ny atiny sy ny fitiavanao ary ny tanjanao! [Fanavaozana] Ny lelafo dia solontenan'ny fifanakalozan-kevitra izay manomboka amin'ny mpamakinao amin'ny alàlan'ny fanehoan-kevitra sy ny famerenana amin'ny laoniny - mamorona fifandraisana amin'ireo mpamaky anao ary manaparitaka ny teninao.
Ho avy bebe kokoa amin'ity… ity dia tiako ny handre ny eritreritrao Telozoro fanaovana bilaogy. Aza misalasala mampiasa ny sary ary mifanakalo hevitra amin'ny mpamaky anao koa. Manantena ny hevitrao aho!
Ary izaho irery no nanao ilay fanoharana niaraka tamin'i Illustrator! The bittbox mandaitra ny toro-hevitra!
Mora tokoa, afaka nanao izany ny Caveman…
Inona no atao hoe tsy fiandaniana?
Mar 9, 2007 amin'ny 12: 27 AM
Liana amin'ny fomba handraisanao ny # 1 aho - Atiny.
Ary ahoana koa ny fandikana izany atiny izany (sy ny fampisehoana / fanaingoana) amin'ny alàlan'ny RSS feed
Mar 9, 2007 amin'ny 9: 16 AM
Salama Steven! Azo antoka indrindra - ny famolavolana dia mitana andraikitra lehibe. Nanoratra kely momba izany aho tao amin'ny bilaogy fa raha ny marina dia tsy manam-pahaizana be amin'izany faritra izany aho toy ny tranokala toa Famolavolana tranonkala mahasalama.
Tokony nanoratra kely kokoa momba ny mpijery aho… amin'ity tranga ity dia mpitantana ambaratonga ambony sy matihanina mahaleo tena ao amin'ity faritra ity izay mety mieritreritra bilaogy orinasa iray.
Mar 9, 2007 amin'ny 1: 19 AM
Heveriko fa miaraka amin'ny atiny ianao dia tokony hanana fahalalana momba ilay lohahevitra sy loharano ahazoana aingam-panahy. Raha hitandrina ny tsy fitoviana ilaina ianao dia tsy maintsy manana hevitra foana, izay tsy mora.
Mitahiry lisitr'ireo lahatsoratra tsy mila ataoko avy hatrany ho an'ireo fotoana izay tsy azoko an-tsaina na inona na inona. Tena manampy amin'ny fihazonana zavatra izany, na dia tsy soratako mialoha aza ny lahatsoratra. Ny fananana lohahevitra hanoratanao fotsiny dia manampy.
Mar 9, 2007 amin'ny 9: 23 AM
Manaiky aho ary tiako ny tendronao! Matetika aho dia manana lohahevitra voatahiry ao anaty drafitra izay fantatro fa mila bilaogiko bebe kokoa. Manampy amin'ny firosoana izy io!
Mar 9, 2007 amin'ny 3: 50 AM
Ka ny tanjon'ny bilaogera dia ny mamaky teboka mizana eo afovoan'ny telozoro, heveriko fa izany no nahatonga anao nisintona ireo singa ireo tao anaty telozoro, sa tsy izany?
Mar 9, 2007 amin'ny 9: 19 AM
Eny, izany tokoa… ny mifantoka amin'ireo lafin-javatra telo no manosika ny fahombiazan'ny bilaoginao. Iray amin'ireo singa manan-danja ezahako ampitaina amin'ny olona ny tsy fanoratana 2-habe amin'ny fanoratana bilaogy. Tsy ampy ny fahazoana ny atiny sy ny filan'ny nofo - misy ny fizotrany manaraka izay ilainao ny manangana haingana.
Misaotra an'ity tamberina ity (ho an'ny rehetra). Manampy ny fomba fijerinao!
Mar 9, 2007 amin'ny 9: 52 AM
Tiavo ny sary. Fitiavana # 2 indrindra - la pasión es MUY contagiosa.
Mar 9, 2007 amin'ny 10: 37 AM
Heveriko fa ny atiny no singa manan-danja indrindra. Ny antsipiriany isa-minitra asehonao amin'ny olona dia haneho izay azonao atao. Mety hahasoa raha mifidy ny lohahevitra mety amin'ny fotoana mety.
Mar 9, 2007 amin'ny 11: 00 AM
Tiako ny Google Ad-words. Ao amin'ny telolafy nieritreretanao azy dia manome sosokevitra izy hoe:
Paris Hilton > Sary, sary an-tsary, fifosana horonan-tsary, bilaogy, fialamboly
Mahaliana… (ie: lol)
Mar 9, 2007 ao amin'ny 6: PM PM
Nohavaoziko ny sary mba hahitako ny lelafo toa tsy 'rantsana lobster'.
Jul 18, 2007 amin'ny 6: 10 AM
Tiavo ny telozoro ary ity lahatsoratra ity… nahazo aingam-panahy tamin'ny lahatsoratra androany.